Antonio Conte oo ku jees jeesay Diego Costa.
Friday, December 14th, 2018 - 01:14:40
Friday August 18, 2017 - 20:37:12 in Wararka by Ow zebio
Kadib markii Costa uu hoosta ka xariiqay inuu doonaayo katigaanka Chelsea. isla markaasina ujeed kiisa ama halka uu saldhigan doono uu kusheegay inee tahay Atletico Madrid. Conte ayaa si layaab leh igu jawaabay mar laweydiiyay arinta Diego.
"Waa wax weyn. waa wax weyn. waxaan doorbiyaa inaa qoslo" Ayuu Conte ku kaftamay mar wax laga weysiiyay wax kusaabsan aribta Costa. " Waxaan kuu sheegi karaa in qof walba oo ka shaqeeyo Chelsea si fiican u ogyahay waxa ku dhacay isaga xili ciyaareydkii tagay. waa layaab"
Costa ayaa iska diiday inuu kusoo laabto kooxda kadhisan magaalada London kadib markii Conte fariin qoraaleed ahaan uu ugu sheegay inuusan kujirin qorshahiisa.
Dhanka kale weeraryahaankaan carada badan aa sheegay kooxdiisa inee uala dhaqantay sidii dambiile oo kale.
Macllinka talyaaniga u dhashay ayaa albaabada kaxietay inuu weeraryahaankaan dib ugu soo laabto kooxdiisa. asigoo ka jawaabau weeraryahaan inuu i ogola lahaa inuu kusoo laabta kooxda iyo in kale." Ma xiiseenaayo inaan sii wado arintaan. waan ku celinayaa. aniga ahaan. waala soo dhaafay" ayuu Conte u sheegay saxaafada.